Cough (ချောင်းဆိုးခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cough (ချောင်းဆိုးခြင်း)
Cough (ချောင်းဆိုးခြင်း) ကဘာလဲ။
လေပြွန်တစ်လျှောက်မှ ဆဲလ်များလှုံ့ဆော်ခံရ သောအခါ ချောင်းဆိုးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီလိုလှုံ့ဆော်မှုကြောင့် အဆုတ်ဟာ လေတွေကို ဖိအားပြင်းပြင်းနှင့် အပြင်သို့ထုတ်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးသည့်ကြာချိန်ပေါ် မူတည်ပြီး ရုတ်တရက်ချက်ချင်း ဖြစ်သောချောင်းဆိုး၊ နာတာရှည်ချောင်းဆိုးနှင့် ရုတ်တရက်လည်းမဟုတ် နာတာရှည်လည်းမဖြစ်သေးသော ချောင်းဆိုး အစသဖြင့်ရှိပါတယ်။
Cough (ချောင်းဆိုးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာ သင့်အဆုတ်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ပုံမှန် သဘာဝအလိုအလျောက် တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတုံ့ပြန်မှုကသင့်ရဲ့ လေပြွန်မှ မီးခိုးနှင့် ဖုန်ကဲ့သို့သေးငယ်သော အမှုန်စတဲ့ လှုံ့ဆော်ပစ္စည်းများကို သန့်ရှင်းပေးပြီး ပိုးမွှားများမဝင်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အချိန်ကြာကြာ ချောင်းဆိုးခြင်းဟာ မနှစ်မြို့စရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖန်တီးတဲ့အပြင် မစစ်ဆေးပဲနေပါက အရမ်းကို အန္တရာယ်ရှိလာနိုင် ပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Cough (ချောင်းဆိုးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ချောင်းဆိုးခြင်းဟာ အခြားသော အခြေအနေတစ်ခုရဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် (သို့) နာတာရှည် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ဖြစ် အောက်ဖော်ပြပါတို့ဟာ ချောင်းဆိုးခြင်းရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါ လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
• ပျို့ခြင်း (သို့)
• လည်ချောင်း(သို့) နှာခေါင်းနောက်တွင် အချွဲပိုများစုခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အအေးမိခြင်း (သို့) တုပ်ကွေးကြောင့်ဖြစ်သော ချောင်းဆိုးခြင်းအများစုမှာ ဘာမျှမလုပ်ရပဲ မြန်မြန် ပျောက်ကင်းတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော် သင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
• ချောင်းဆိုးပြီးနောက် နုန်းသွားခြင်း၊
• ညဘက်တွင် အဆက်မပြတ်ချောင်းဆိုးခြင်း၊
• တစ်ပတ်ကျော်သည်ထိ ချောင်းဆိုးမသက်သာခြင်း၊
• မောလာခြင်း (သို့) အသက်ရှုရခက်ခဲလာခြင်းစတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Cough (ချောင်းဆိုးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သင့်အဆုတ်ထဲမှာ လှုံ့ဆော်ပစ္စည်းရှိတဲ့အခါ ချောင်းဆိုးပြီး သည်လှုံ့ဆော်ပစ္စည်းကို ထုတ်ဖို့ ခနဓါကိုယ်က သဘာဝအရ တုံ့ပြန်ပါတယ်။ အအေးမိခြင်း(သို့) တုပ်ကွေးဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အစရှိတဲ့အရာတွေဟာ သင့်အဆုတ်ကို လှုံ့ဆော်နှိုးဆွနေတဲ့ အရာအများစုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဖျားနေတဲ့အချိန်မှာ ချောင်းဆိုးခြင်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို အဆုတ်အပြင်ကို ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြောမှာကတော့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း နှင့် ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေး နေသမျှ အရာတွေကို အဆုတ်က ချောင်းဆိုးပေးခြင်းဖြင့် အပြင်ကို ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ လေအေး၊ စီးကရက်ငွေ့၊ မီးခိုး (သို့) အမွှေးနံ့ပြင်းပြင်း တွေဟာလည်း ချောင်းဆိုးစေဖို့ နှိုးဆွတဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုတ်ရောင်ခြင်း၊ အိပ်နေရင်း အသက်ရှုမမှန်ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ကျဝေဒနာရှိခြင်း နှင့် ဆေးအချို့၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြောင့်လည်း ချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Cough (ချောင်းဆိုးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ပတ်ဝန်းကျင်မှ လှုံ့ဆော်ပစ္စည်းတွေဟာ ချောင်းဆိုးခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာဆိုလျှင် ဓါတ်မတည့်သောအရာများ နှင့် နေထိုင်နေတဲ့ လူတွေဟာ ဓါတ်မတည့်မှုအတွက် ဆေးသောက်ပြီး ချောင်းဆိုးကုနေရပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ဆေးလိပ်သောက်ပြီး ချောင်းဆိုးနေသူဖြစ်ပါက ဆေးလိပ်ဖြတ်မှသာ သက်သာမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်သောက်သော် ပိုဆိုးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ပန်းနာရင်ကျပ် (သို့) နာတာရှည် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကဲ့သို့ နာတာရှည်လူနာဖြစ်ပါက လှုပ်ရှားသွားလာ နေထိုင်မှုနှင့် အချို့သောအခြေအနေများတွင် အဆက်မပြတ်ချောင်းဆိုး သောကြောင့် ခံစားလာရပေမည်။ angiotensin converting enzyme (ACE) ကဲ့သို့ အချို့ဆေးများဟာ ချောင်းဆိုးစေပါတယ်။ သို့သော် ချောင်းခြောက်သာဖြစ်ပြီး ဆေးရပ်လျှင် သက်သာသွားပါတယ်။
Cough (ချောင်းဆိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ချောင်းဆိုးခြင်း၏ အကြောင်းခြင်းရာကို အဖြေရှာ အတည်ပြုရန်မှာ ဆရာဝန်အား သင်ပေးသော ရောဂါရာဇဝင် အချက်အလက်များပေါ်တွင် များစွာ မူတည်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးသည့်ကာလကြာချိန်၊ ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် လက္ခဏာများ၊ သက်သာစေသော (သို့) ပိုဆိုးစေသော အရာများ စသဖြင့် ဆရာဝန်က သင့်ကို မေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရောဂါအမည် မတပ်ခင် ဆရာဝန်က သင့်ကို စမ်းသပ်မှုများ (သို့) ဆေးစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ တက်တက်ကြွကြွနှင့် ဆရာဝန်ကို သင့်အခြေအနေအကြောင်း တိကျစွာပြောဆိုဆွေးနွေးပြီး ကိုယ်တိုင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့ရာ အရေးကြီးပါတယ်။
Cough (ချောင်းဆိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
များသောအားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ချောင်းဆိုးခြင်းဟာ သူ့အလိုလို ပျောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်လေးတွေကို သုံးပါက ရောဂါကို တိုက်ခိုက်နိုင်ကာ ကိုယ်ခံအားတက်လာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးသက်သာစေရန်နှင့် ချွဲပျော်စေသောဆေးများ၊ pholcodine, dextromethorphan ပါသော ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ နှင့် antihistamine , antibiotics (ပဋိဇီဝဆေးများ) စတာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
http://www.avogel.co.uk/health/immune-system/cough/. Accessed June 12, 2016.
http://www.emedicinehealth.com/coughs/article_em.html. Accessed June 12, 2016.
http://www.medicalnewstoday.com/articles/220349.php?page=2. Accessed June 12, 2016.